Waxqabadyo Gacmo-Isku-taag ah, Mudaaharaadyo iyo Madadaalo Is-dhexgal oo Dheeraad ah ee Bandhigga Farshaxanka Columbus 2022 - Bandhig Faneedka Columbus
Si dhakhsi ah ha loo sii daayo
Qofka lala xiriirayo: Jami Goldstein
COLUMBUS, Ohio - Iyadoo in ka badan 200 oo fanaaniin ah ay ku soo bandhigayaan Bandhigga Farshaxanka Columbus, oo ay soo bandhigtay Hay'adda Awoodda Korontada ee Maraykanka oo ay soo saartay Golaha Farshaxanka ee Weyn ee Columbus (Golaha Farshaxanka), hubaal waxaa jira wax badan oo la arki karo Juun 10-12 ee webiga. laakiin waxaa kaloo jira wax badan oo la sameeyo. Damaashaadku waxa ay siisaa fursado is-dhexgal ah oo loogu talagalay dadka da' kasta leh iyo xirfad-dejinta si ay u abuuraan, u daawadaan, u sahamiyaan oo ay u bartaan.
Tuulada Farshaxanka ee Weyn
Sannad kasta xafladda Farshaxanka Columbus, hal-abuurrada magaalada oo dhan ayaa isugu yimaada si ay u dhistaan ​​meel ay dadku khibrad u leeyihiin oo ay u iibsadaan farshaxanka maxalliga ah. Tuulada Farshaxanka Weyn ee Maxalliga ah, oo ay kafaalo-qaadeyso CoverMyMeds, waxay fadhidaa albaabka laga galo Festival-ka ee Franklinton ee Waddada Galbeedka Rich ee u dhow 400 West Rich. In ka badan 60 farshaxan oo ka socda badhtamaha Ohio ayaa iibin doona shaqadooda, halka fanaaniinta la xushay ay muujin doonaan wax kasta laga bilaabo alwaax-rogid ilaa farshaxan-yaqaan Jabbaan, bir-tume, xarfo xardhan, farshaxan-samaynta maqaarka iyo wax ka badan.
Ku dhow, Masraxa Muusikada Maxaliga ee Weyn ayaa leh saf cajiib ah oo ah fannaaniinta fadhigoodu yahay Columbus. Iyo kuwa qadariya farshaxanka wax-soo-saarka, Beerta Rhinegeist Beerta waxay leedahay beero kala duwan oo kala duwan - oo ku habboon isku-darka qadada ama cashada baabuur cuntada maxaliga ah.
Tuulada Hawlaha Gacan-ku-oolka ah
Had iyo jeer soo jiidasho caan ah, Tuulada Hawlaha Gacmaha-On ee Festifaalka oo ay soo bandhigtay Battelle ayaa xitaa wax badan ka sii socota sanadkan. Waxay ku taal saddexagalka cawska ee koonaha koonfur bari ee Magaalada iyo Belle, tuulada waxaa ka shaqeeya tabaruceyaal ka socda in ka badan 11 hay'adood oo maxali ah laga bilaabo 7 subaxnimo ilaa 10 galabnimo Jimcaha; 7 subaxnimo ilaa 10 galabnimo Sabtida; iyo 5 subaxnimo ilaa XNUMX galabnimo Axad.
Hawlaha waxaa ka mid ah daabacaadda, rinjiyeynta acrylics, abuurista makhluuqyo cajiib ah, dhisidda qalcado ciid kinetic ah iyo qaar kaloo badan. Iyada oo ay gacanta ku hayaan wakiillo ka socda ururada sida A Kid Again, Art Garden Academy, Axis Glass, Xarunta Dhallinta Kaleidoscope, Matxafka Farshaxanka Ohio iyo Guriga Star, waxaa jira hawlo ku habboon dano iyo da'o kala duwan. Ku dhawaad ​​dhammaan waxqabadyadu waa bilaash waxayna u furan yihiin carruurta iyo dadka waaweyn labadaba.
Carruurtu waxay ku ciyaaraan ururiyaha farshaxanka gudaha qolka carruurta ee ay soo bandhigtay PNC. Sabtida iyo Axadda laga bilaabo duhurkii ilaa 1:30 galabnimo carruurta da'doodu tahay 12 iyo kuwa ka yar waxaa lagu martiqaaday inay la kulmaan bandhiga gaarka ah ee carruurta leh - oo ku yaal agagaarka Tuulada Hawlaha Gacan-ku-oolka - oo leh farshaxan ay ku deeqeen farshaxanno soo bandhigay. Qayb kasta waxaa lagu qiimeeyaa $5 iyo wax ka yar.
La kulan Shark Art
Had iyo jeer socodka, mascotka la jecel yahay ee Bandhigga Farshaxanka Columbus ayaa ka muuqan doona labada dhinac ee webiga. Dabaaldegayaasha waxay dhihi karaan hello oo waxay iska qaadi karaan Arthur S. Hark (oo loo yaqaan Art Shark), kaasoo laga heli karo isagoo ku dabaalanaya agagaarka Tuulada Waxqabadka Hands-on (Sabtida, 11:30 subaxnimo ilaa 1 galabnimo iyo Axad, 11:30 subaxnimo ilaa 12:30 galabnimo) ama goobta Beerta Bicentennial (Jimcaha, 3:45-4:45 galabnimo; Sabti, 3-5 galabnimo)
Ku sawir Mr. J goobta WOSU's Booth
Keen qoyska oo dhan rugta Warbaahinta Dadweynaha ee WOSU Sabtida, Juun 11 laga bilaabo 2-4 galabnimo si ay waxqabad hal abuur leh ugu muujiyaan Jon Juravich, aka “Mr. J” oo ka socda WOSU Fasalka abaal-marintiisa taxanaha fiidyaha ah Isagoo la sawiran Mr. J, oo ay weheliso booqasho gaar ah oo ka timid dabeecada lebbiska ee PBS KIDS!
Ku habbee xaflada Farshaxanka
Shark Farshaxanku maaha sawirka kaliya ee madadaalo leh. Martida xafladda waxay isku dhigi karaan qaabka weyn ee selfie, oo dhanka waqooyi ka xiga isgoyska Buundada Rich Street iyo Washington Boulevard, si aad u hesho sawir si fiican loo habeeyey oo leh bilicda quruxda badan ee magaalada.
Qaado tallaalkaaga Covid
Waxaa la bixiyaa iyadoo lala kaashanayo Caafimaadka Dadweynaha Columbus iyo Qeybta Dabka ee Columbus, damaashaadka u qalma waxay ka heli karaan tallaalkooda Covid goobta ku taal Waddada Town ee u dhow Tuulada Hawlaha Gacan-ku-oolka ah.
Saacadaha Bandhiga: Jimcaha, Juun 10 ka 11 subaxnimo ilaa 10:30 galabnimo; Sabti, Juun 11keeda laga bilaabo 10 subaxnimo ilaa 10:30 galabnimo; iyo Axada, Juun 12 laga bilaabo 10 subaxnimo ilaa 5 galabnimo (Fadlan ogow: Jimcaha iyo sabtida waabab farshaxanku waxay xidhaan 9 galabnimo; fanaaniintu waxay haystaan ​​ikhtiyaarka ah inay furnaadaan hadhow.)
Si aad ugu tabarucdo Bandhig Faneedka Columbus, fadlan tag columbusartsfestival.org/engage/volunteer/.
Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan Bandhig Faneed Columbus, wac (614) 221-8625 ama booqo columbusartsfestival.org.
Si aad u xulato sawirro tayo sare leh, booqo Bandhigyada bogga warbaahinta.
Bandhiga Farshaxanka Columbus waxaa soo saaray Golaha Farshaxanka Columbus-weyn.
Bandhig faneedka Columbus 2022 waxaa soo bandhigay Mu'asasada Korontada ee Mareykanka. Kafiilasha dheeraadka ah iyo la-hawlgalayaasha waxaa ka mid ah Bank of America, Qubeyska & Jirka Works, Battelle, Cardinal Health, CDDC, CoverMyMeds, Gateway Film Center, Huntington National Bank, IGS Energy, JP Morgan Chase & Co., King Business Gudaha, Maker's Mark, The Ohio Jaamacadda Gobolka, Iskaashatada Tignoolajiyada OSA, Paul-Henri Bourguignon Foundation, PNC, Rhinegeist, Toyota, White Castle, Lemonade Adduunka oo dhan iyo Mu'asasadda Warshadaha Worthington. Kafiilka warbaahinta waxaa ka mid ah ABC6/FOX28, CD92.9, Lamar Outdoor, Joornaalka Ohio, Orange Barrel Media, RSVP, WCBE, WOSU Public Media iyo WSNY.
Hadafka Golaha Farshaxanka Columbus Weyn: Si loo taageero oo loo hormariyo farshaxanka iyo dharka dhaqanka ee Columbus. www.gcac.org
Golaha Farshaxanka Qarniga Weyn wuxuu taageero dhaqaale ka helaa Magaalada Columbus, Guddiyada Degmooyinka Franklin iyo Golaha Arts-ka Ohio. Midkoodna maaliyaddan looma adeegsan wax soo saarka Bandhig Faneed Columbus.